Qabeenyuma Keenya Cilfaan Hamaaratanii Falaanaan Nuu Qicuu Hin Qaban! – Kichuu
HomeAfaan OromooQabeenyuma Keenya Cilfaan Hamaaratanii Falaanaan Nuu Qicuu Hin Qaban!
Qabeenyuma Keenya Cilfaan Hamaaratanii Falaanaan Nuu Qicuu Hin Qaban!
Qabeenya Oromoo kan tahe warqii Gujii keessatti argamu warqii Laga Dambii qofa irraa waggoota 16 keessatti wanni saamame birrii bilyoona 29.5 oli. Qabeenya bifa kanaan saamamaa jiru lakkoofnee keessaa bahuu hin dandeenyu!
OPDO’n garuu, dargaggoota hojii dhabaniif birrii bilyoona 6 ramadne jettee halkaniif guyyaa warraaqsa diinagdee jechuun dhaadhessaa jirti. Bilyoona 6’n sanuu dhugaan hojiirra oolchiti jedhee an akka nama tokkootti hin amanu.
Dhiga ilmaan oromoo irratti akka dhiichisteetti hin haftuu…..
Mee laalaa! Baajata isaan guddaa godhanii warraaqsa diinagdee jedhaniin kana galiin Warqii Laga Dambii qofa irraa argamu bilyoona 6 irraa baaftee bilyoona 23.5’tu hafa. Kanaafuu wanti guddaan irratti xiyyeeffatamuu qabu galiin Oromiyaa irraa argamu akka hin saamamne godhuudha. Kana godhuuf ammoo Wayyaanee saamichaaf dhufte of keessaa baasuu qofatu fala. Kanaan ala wal sobuun faayidaa hin qabu yoo gabrummaa jalatti wal hambisuu taate malee.
Sababni kana kaaseef, qicaan xixiqqoo akkanaa tun yoo qabsoo ummata Oromoo kan duubatti deebiftu taate, rakkoon keenya hin furamnee beekaa! Gaafiin ummata keenyaa gaafii abbaa biyyummaa, qabeenya ufiirratti abbaa tahuudha. Kanarraa duubatti deebi’uu hin qabnu yaa Oromoo!
Via: Ferhan Abdulselam
Breaking News Oduu Afaan Oromo 08, Bit. 2017